ငွေသား CASHBACK ၊ အခမဲ့ဆီဖြည့်ခွင့်အပြင် အထူးလက်ဆောင်များစွာရရှိနိုင်မယ့် AUTOCITY - SUZUKI ROADSHOW ပွဲကြီး - Myanmar Automobile and Equipment Directory
ငွေသား CASHBACK ၊ အခမဲ့ဆီဖြည့်ခွင့်အပြင် အထူးလက်ဆောင်များစွာရရှိနိုင်မယ့် AUTOCITY - SUZUKI ROADSHOW ပွဲကြီး
ငွေသား CASHBACK ၊ အခမဲ့ဆီဖြည့်ခွင့်အပြင် အထူးလက်ဆောင်များစွာရရှိနိုင်မယ့် AUTOCITY - SUZUKI ROADSHOW ပွဲကြီး လာပါပြီဗျို့ . . .
Roadshow မထွက်ဘူးလား? ဘယ်တော့ထွက်မလဲ? မေးနေကြတဲ့ အမျိုးတို့အတွက်
AutoCity က Cashback တွေ၊ ဆီဖြည့်ခွင့်တွေအပြင် Showroom က သီးသန့်ပေးတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းလက်ဆောင် အကြမ်းကြီးတွေနဲ့ အမျိုးတို့ စောင့်ရကျိုးနပ်စေဖို့ အရောက်လာခဲ့ပါပြီနော် . . .
ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်က အချက်အချာနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာပလာဇာမှာလာမယ့် ဩဂုတ်လ ၂၆၊ ၂၇ ရက် ( ၂ ) ရက်တိုင်တိုင်ကျင်ပသွားမှာဖြစ်ပြီး ပွဲရက်အတွင်းမှာ ဝယ်ယူကြမယ့် Customer များကို Suzuki Ciaz ဝယ်ယူပါက ၅ သိန်းဖိုးအခမဲ့ဆီဖြည့်ခွင့်နှင့် ပြန်အမ်းငွေ ကျပ် (၁၀) သိန်းတိတိနှင့် ပရိုမိုးရှင်းအထူးလက်ဆောင် ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Suzuki GLX ဝယ်ယူပါက ၅ သိန်းဖိုးအခမဲ့ဆီဖြည့်ခွင့်နှင့် ပြန်အမ်းငွေ ကျပ် (၇) သိန်းတိတိနှင့် ပရိုမိုးရှင်းအထူးလက်ဆောင်တွေ
Suzuki GL ဝယ်ယူပါက ၅ သိန်းဖိုးအခမဲ့ဆီဖြည့်ခွင့်နှင့် ပရိုမိုးရှင်းအထူးလက်ဆောင်တို့ကို ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား . . .
Suzuki ကားသစ်ကြီးကို ငွေသား Cashback၊ အခမဲ့ ဆီဖြည့်ခွင့်၊ ပရိုမိုးရှင်းအထူးလက်ဆောင်များနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ AutoCity ရဲ့ Suzuki Roadshow ပွဲကြီးကို အရောက်လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား . . .